IHipster Touch kwiGrisi yakudala nguLéo Caillard | Izidalwa ezikwi-Intanethi
ULeo Caillard Uyinxalenye yesi sizukulwana sitsha sifikayo ekufotweni, esisebenza ngenkangeleko engaqhelekanga. Kude lee kwizifinyezo eziqhelekileyo esihlala sizibona, ligcisa elibukhali nelibonwayo ekufuneka indlela yalo ikhe ijongwe. Udlala ngetekhnoloji yangoku ngamaxesha ahlukeneyo, le ndlela isimemela kuyo phinda ufumane okwangoku kunye nexesha langoku ngamehlo amatsha. Icwecwe ngombala ezihlekisayo, kwaye isenza sizibuze imibuzo malunga nemikhwa yethu yoluntu.
Kwigalari engezantsi, ungayibona imifanekiso eqingqiweyo ye Louvre apho ucinga ngomyuziyam kwixa elizayo. Uhlala enesiphumo esifanayo 'Yothusa'. Iimpawu zakhe zokufota zenza intsingiselo kude neziphumo, zihlala ziboleka ukubonakalisa kwindima yemifanekiso kunye nokumelwa kwehlabathi asinika lona ukuba silibone. Imisebenzi ye ULeo Caillard usibhaptiza ngokupheleleyo kwiifoto zenkulungwane ye-XXI.
ULeo Caillard imele isizukulwana esitsha samagcisa asakhasayo nayo umbono owodwa. Imifanekiso yakhe iqokelelwe ngobunono ngokudibanisa izinto ezintsha nezindala. UCaillard usimema ukuba siphinde sifunde kwaye sibuze indawo esihlala kuyo ngokuthamba, uburharha kunye nemvakalelo. Uthotho lwakhe "KwiMyuziyam" lwasungulwa ngo-2012, kwaye luye lwabonakaliswa kuninzi iintsika zamazwe ngamazwe wobugcisa. Ndiyathemba ukuba uyithandile.
Fuente [ULeo Caillard]
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » I-Hipster Touch kwiGrisi yakudala nguLéo Caillard